Rubatsiro Center | Zeevou
Zeevou Ziva ndiyo yepakati poindi yezvinyorwa zvese zvekubatsira, mavhidhiyo ekudzidzisa uye ma FAQ ayo anokubatsira iwe kushandisa zvakanyanya edu maficha. Kunyangwe iwe urikutanga kubva uye uchida kutevera nhanho-nhanho yekumisikidza gwara kana uri mushambadzi mushandisi ari kuda kutsvaga zvimwe nezve chinhu chitsva, ino ndiyo nzvimbo yekutanga kutarisa.
Tiri pano kuti tikutsigire nhanho yega nzira.
Nhanho-nhanho set-up gwara uye yakadzama kutarisisa maitiro ekushandisa akasiyana zvikamu zveiyo system.
Verenga mhinduro kune yedu Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo, kana bvunza mubvunzo wako wega.
Kune vanoona vadzidzi isu tiri zvakare kuisa pamwechete hupfumi hwekudzidzisa mavhidhiyo.
Iva chikamu chinoshingaira cheMhuri yeZeevou nekubatana nenharaunda yedu yepasirose online. Govera zvaunodzidza, network, kana kubvunza mumwe wako Wemubatanidzwa Mauto kuti atsigire.
Joinha yedu WhatsApp Boka
Gamuchira chaiyo-nguva ziviso kubva kuChikwata chedu.
Iti Hi pa Facebook
Ipa inoramba ichienderera mberi nezveramangwana reZeevou.
Unganidza kune Chiteshi kuburikidza neCal Link
Batanidza kuna Elavon
Dzimba Dzimba Mobile App
Husiku / Svondo / Mwedzi Mwero Rate Zvirongwa uye Mitengo
Tsvaga yako Webhusaiti URL
Batanidza kuna Xero
Iwe Unoda Rumwe Rutsigiro here?
Tora A Akazvitsaurira
Kana iwe uri Mutariri, iwe uchave wakapihwa Partner Kubudirira maneja pakusaina kusaina. Wako Partner Achibudirira maneja anogara aripo kuburikidza neemail kana pamusoro WhatsApp, saka inzwa wakasununguka kusvika kwavari.
Kune Vatariri uye maEvangelist zvakafanana, edu anobatsira Partner Engagement Mamaneja anowanikwa kutenderera nguva paLive Chat. Kana iwe usina kukwanisa kuwana mhinduro kumibvunzo yako uchishandisa zviwanikwa zvedu pamusoro, inzwa wakasununguka kutisiira tambo.